5g သည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဤတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကြသည်
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ 5G သည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဤတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကြသည်
5G သည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဤတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကြသည်
ဒါဟာခေတ်သစ်တစ်ခုရဲ့အရုဏ် ဦး ပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုနှောင့်ယှက်ရန်ကတိပေးသောကွန်ယက်နည်းပညာ , မရေမတွက်နိုင်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို enable နှင့် Jetsons နီးစပ်သူတစ် ဦး ခြေလှမ်းယူပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအများစုသည်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည် သူတို့ရဲ့ 5G ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်း ။ US မှာ AT&T, Verizon နဲ့ T-Mobile တို့ကသူတို့ရဲ့ 5G ကွန်ယက်တွေကိုအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊
ဤတွင် Verizon, AT&T နှင့် T-Mobile တို့ 5G လွှမ်းခြုံနိုင်သောနေရာများရှိသည်။
Verizon 5G ကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုမြေပုံ - မည်သည့်မြို့များကိုဖုံးလွှမ်းထားသနည်း။
AT&T 5G / 5G E ကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုမြေပုံ - ဘယ်မြို့များကိုဖုံးလွှမ်းထားသလဲ။
T-Mobile 5G ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုမြေပုံ - မည်သည့်မြို့များကိုဖုံးလွှမ်းထားသနည်း။
5G တာဝါတိုင်များသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအရှိန်အဟုန်ဖြင့်စတင်လာသည်နှင့်အမျှနည်းပညာသည်မည်သည့်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူလာသည်နှင့်အမျှ 5G သည်လက်ရှိ 4G LTE ကွန်ယက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများဖြင့်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကဲ့သို့ပင် အချို့သုံးစွဲသူများကဤနည်းပညာအသစ်သည်လုံခြုံမှုရှိ၊ မရှိ၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည် 3G နှင့် 4G နှင့်အတူယခုအချိန်အထိအသုံးပြုခဲ့သည့်အရာကဲ့သို့လုံခြုံမှုရှိမရှိကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ယခုအချိန်အထိသယ်ဆောင်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့ဆောင်ရန် 600MHz မှ 2.6 GHz မှမည်သည့်နေရာတွင်မဆို spectrum band များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ၎င်းသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အကွာအဝေးနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ 5G နှင့်အတူ၊ သို့သော်သင်ကြားဖူးသမျှမီလီမီတာလှိုင်းများအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလျှင် T-Mobile နှင့် 600 MHz နှင့် 2.5 GHz (Sprint မှဝယ်ယူသော) အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းရောင်စဉ်များကို 5G ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက်လည်းအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်သယ်ဆောင်သူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော band များဖြစ်သော 3.5 GHz,6GHz နဲ့တောင်မှ 30 GHz နဲ့တက်! 30 GHz လွန်းအသံ? ထိုမီလီမီတာလှိုင်းများအမှန်တကယ်စတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ 5G စွမ်းဆောင်နိုင်သောဖုန်းအများစုသည်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီး 4G အသုံးပြုသောရောင်စဉ်နှင့်ပိုမိုနီးစပ်သည်။ သို့သော်အချို့သောမော်ဒယ်များမှာ Verizon & apos; s 5G ကွန်ယက်ဖြစ်သော OnePlus 8 UW သို့မဟုတ် Galaxy A71 UW ကဲ့သို့ထို 30GHz မီလီမီတာခတ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ မီလီမီတာလှိုင်းများကို 30 - 300 GHz တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ 30 GHz ကြိမ်နှုန်းပါသောလှိုင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအရှည် 10mm ရှိပြီး 300 GHz လှိုင်းသည် 1mm အရှည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 5G အသုံးပြုမှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောတီးဝိုင်းများသည်နောက်ဆုံး၌သော့ဖွင့်လာလျှင်ပင်၎င်းနည်းပညာသည်တစ်သက်တာလုံးမီလီမီတာအကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။
USA တွင် Verizon၊ AT&T, T-Mobile အတွက်သို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ရန်အတွက် USA တွင်အကောင်းဆုံး 5G ဖုန်းများ
၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက် 5G ဖုန်းများ
ဒီ 5G မီလီမီတာလှိုင်းများဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား
အချို့သောမီလီမီတာလှိုင်းများသည်ဤမျှမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများဖြင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုကြိတ်ကြိတ်တိုးနိုင်သည့်ကြိမ်နှုန်းအလွန်မြင့်မားသည်ဟုအချို့ကသင်ကြားကောင်းကြားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ထို doesn & apos; t ကိုမှာအားလုံးအမှုဖြစ်ဟန်ရှိသည်! ၃၀ GHz အမြန်နှုန်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်းတကယ့်အဖြစ်အပျက်မှာဤလှိုင်းများသည်မည်သည့်ထိခိုက်မှုကိုမဆိုလုပ်နိုင်လောက်သောစွမ်းအားနီးပါးဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာဖြစ်ကြသည်အပြင်ဘက်ရှိမယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း၏လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာတစ်ခုထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သတင်းကောင်းကဒီအန္တရာယ် - အန္တရာယ်တံခါးခုံကို 30 ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်, သို့မဟုတ်ပင် 300 GHz!
မီလီမီတာလှိုင်းထက် ကျော်လွန်၍ ဘာရှိသနည်း။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 30GHz နှင့်အထက်ရှိသော 5G band အသစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်ထိခိုက်မှုကိုမဆိုလုပ်နိုင်လောက်သောအစွမ်းထက်သည်။ Phew, & apos; s ကိုသိရန်ကောင်းသော, isn & apos; က t?
ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းမီလီမီတာလှိုင်းအလျားဟုခေါ်သည့်အရာသည် 300 GHz လှိုင်းများအထိတိုးချဲ့သည်။ ၎င်းသည် microwave အကွာအဝေးတစ်ခုလုံး၏အကွာအဝေးလည်းဖြစ်သည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထက်ကျော်လွန်သောအရာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် infrared light ဟုလည်းခေါ်သည့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လူ့မျက်စိဖြင့်မမြင်ရသောအနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းများသည် 300 GHz မှ 385 THz (Teraherz) အထိရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းများသည် ၁ မီလီမီတာမှအတိုဆုံးမိုက်ခရိုဝေ့ (အရှည်) မှ ၇၈၀ နာနိုမီတာအထိ (၁၀၀၀ နာနိုမီတာနှင့်ညီမျှသည် ၀.၁ မီလီမီတာနှင့်တူညီသည်။
ထက်နည်း 0,01 nm 30 ကျော် EHz
ဓာတ်မှန် 0.01 nm - 10 nm 30 EHz - 30 PHz
ခရမ်းလွန် 10 nm - 400 nm 30 PHz - 790 THz
400 nm-700 nm 790 THz - 430 THz
700 nm - 1 မီလီမီတာ 430 THz - 300 GHz
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် 1 မီလီမီတာ - 1 မီတာ 300 GHz - 300 MHz
ရေဒီယို ၁ မီတာ - ၁၀၀၀၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည် 300 MHz -3Hz
အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်များစွာသောအသုံးပြုမှုရှိသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအမျိုးအစားများလည်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာနေမှအပူ (အပူ) မှထက်ဝက်ကျော်သောအရာဝတ္ထုများသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနီအောက်ရောင်ခြည်
ဒီချစ်စရာကောင်းပြီးသေးငယ်သောလှိုင်းများပိုမိုပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သော 'မြင်ရသောအလင်း' ၏လှိုင်းအလျားသို့လှိုင်းအလျား ၇၀၀ မှ ၄၀၀ မှ nm သို့လှိုင်းများသို့မဟုတ် 430 THz မှ 790 THz ၏ကြိမ်နှုန်းများပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာမြင်နိုင်သောအလင်းရောင်စဉ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများကိုလည်းမထိခိုက်စေပါ။
အိုင်းယွန်းဓါတ်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်သင်္ကေတငါတို့သူငယ်ချင်းဟောင်း - Ultraviolet! (ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ။ ) ခရမ်းလွန်ရောင်စဉ်သည်လှိုင်းအလျား ၄၀၀ မှ ၁၀ nm နှင့် ၇၉၀ မှ ၂၈၀ ပါ Petaherz မှကြိမ်နှုန်းပါ ၀ င်သည်။ (1 PHz = 1,000,000 GHz) ။ အစပိုင်းတွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အများအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းဤအကွာအဝေးအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့သည် non-ionizing မှ ionizing radiation သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုလေ့လာသည့်နေရာဖြစ်သည်။
အိုင်ယွန်နီယမ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆိုသည်မှာဓါတ်ရောင်ခြည်အမှုန်များသည်စွမ်းအင်များများစွာရှိသောကြောင့်အီလက်ထရွန်များကိုမော်လီကျူးများသို့မဟုတ်အက်တမ်များမှနှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာတွင်ရူပဗေဒပညာရှင်များမရှိတော့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာများကိုရှင်းပြနိုင်သော်လည်းဆိုးရွားနေပုံရသည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ionization ကိုအလိုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏တစ်နေရာရာမှာအရာဝတ္ထုများသည်အစာစားချင်စိတ်စတင်လာသည့်နေရာဖြစ်သည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အထက်တွင်ရှိသည့် x-Ray အကွာအဝေး (10 nm to 0.1 nm / 30 Petaherz မှ 30 Exaherz) ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အထက်မှအရာအားလုံးသည်အိုင်းယွန်း (nionizing) ဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည် x-rays များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, သေးငယ်တဲ့ဆေးများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဟုမသတ်မှတ်ကြသည်နှင့်အမှန်တကယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများမှတဆင့်ငါတို့သက်သာချောင်ချိရေးကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး၌ gamma rays (လှိုင်းအလျား ၁.၁ nm ထက်နည်းပြီးကြိမ်နှုန်း ၃၀ EHz ထက်ပိုသောလှိုင်းများ) ရှိသည်။ ဤအရာများကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အစွမ်းသတ္တိရှိသောကြောင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ထားသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်နည်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းမရှိသောဤသေးငယ်သောအိုင်းယွန်းနီးပါးသတ္တဝါများကိုဘေးဥပဒ်ကဲ့သို့ရှောင်ရှားသင့်သည် (ဆေးဝါးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးချမှုများရှိသည်) ။
ကောင်းပြီ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို Non-ionizing နှင့် ionizer အဖြစ်ခွဲခြားသည်။ ရေဒီယို၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်မြင်နိုင်သောအလင်းများကဲ့သို့သောအိုင်းယွန်းမပြုသည့်ဓါတ်ရောင်ခြည်အမျိုးအစားများကိုဘေးကင်းလုံခြုံသည်ဟုမှတ်ယူပြီး၊ ultraviolet၊ x-rays နှင့် gamma rays ကဲ့သို့သော ionizer အမျိုးအစားများသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
5G သည်ယခင်ဆယ်လူလာနည်းပညာများထက်ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏကိုအသုံးပြုနေစဉ်၎င်းမီလီမီတာလှိုင်းများအပါအ ၀ င်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ရောင်စဉ်အကန့်အသတ်အတွင်းတွင်လုံခြုံစွာတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ 'မီလီမီတာလှိုင်းများ' သည်အချို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းမည်ဖြစ်သော်လည်းလက်ရှိတွင် 5G ကွန်ယက်များသည်အန္တရာယ်ရှိမည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
ဤအရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ 5G ကမ္ဘာသစ်တွင်လုံခြုံမှုရှိသင့်သည်၊ ဘဝတိုးတက်မှု၏အရည်အသွေးကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားရမည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတွေ့ရတဲ့အချက်အလက်ကအကူအညီရသလား။ 5G ကွန်ယက်များလုံခြုံမှုရှိတော့မည်ကို သိ၍ ယခုသင်ပိုမိုသက်သာလာသလား။ သင်၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များဖြင့်မျှဝေပါ
အိုင်ဖုန်း 12 လိုလားသူ max ကိုကော့စ
java မှာ string ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
iPhone SE အတွက် 64GB လုံလောက်ပါသလား။ ဓာတ်ပုံနှင့်အက်ပ်ဘယ်နှစ်ယောက်သိမ်းထားနိုင်သလဲ။
ကြီးမားသော Apple Watch ရောင်းချမှုသည်မြင့်မားသော Series 3, Series4နှင့် Series5လျှော့စျေးများကိုအသစ်သောအမြင့်သို့ရောက်သည်
Final Fantasy XV Pocket Edition ကို Android နှင့် iOS တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Galaxy Note 8 navbar ကိုဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မလဲ - အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခလုတ်များကိုပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း၊ ပျောက်စေခြင်း!
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အိုင်ပက်ဒ်ကို ၀ ယ်သင့်သည်။ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်လား
Galaxy S20 ရဲ့ Single Take: အဲဒါဘာလဲ၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
အကောင်းဆုံး Cyber ​​တနင်္လာနေ့ကြိုးမဲ့နားကြပ်ရောင်းဝယ်မှု
အပေးအယူ: iPhone 8 နှင့် 8 Plus တို့သည် Walmart တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ (Verizon, AT&T သို့မဟုတ် Sprint အရစ်ကျအစီအစဉ်များဖြင့်) ဖြစ်သည်။